Fampianarana - Ny vola sy ny fanompoana ny Tompo - FJKM Québec - Canada
Home > Toriteny sy fampianarana > Fampianarana > View Sermon
Fampianarana – Ny vola sy ny fanompoana ny Tompo
18 avril 2018 by Hasina Razafindrakoto
Azo resahina aty am-piangonana ve ny vola?
Miisa in-2084 ny Baiboly no miresaka mifandraika amin’ny vola sy ny harena raha tsy misy afa-tsy in-215 ny resaka finoana ary in-208 ny mahakasika ny famonjena. Tsy midika akory izany fa manao ho zava-dehibe ny vola sy ny harena ny Baiboly fa milaza fampianarana sy fampitandremana maro kosa momba azy.
Jesoa Kristy dia niresaka vola sy harena fony Izy tety an-tany.
Sarotra ary tsy azo atao ny mampivady ny finoana an’Andriamanitra amin’ny finoana ny vola ho i Jesoa (mamôna no andriamanitry ny vola) ao amin’ny 6: 24. – Nasain’i Jesoa navadika vola ny fananan’ilay mpanankarena mba hanampiany mahantra ary manaraka Azy izy avy eo, araka ny voalazan’ny Lio. 18 : 22.
Aty am-piangonana dia mahazatra antsika ny manao fanatitra sy ny vokatra aseho amin’ny alalan’ny marika hita maso dia ny vola.
Ary isan’ny andraikitra fampandehanana ny fiainam-piangonana ny fananantsika « Mpitahirivola » na « Mpitantsoratrinivola ».
Ireo rehetra ireo no midika fa misy resaka vola ary resahana aty am-piangonana ny vola sy ny manodidina azy.
Ny vola aty amin’ny fiainam-piangonana ?
Mitanisa olona miavaka, nanam-bola sy nanan-karena ny Soratra Masina (Joba, Abrahama, Solomona, Paoly Apostoly, sns).
Endriky ny fitahiana sy fahasoavana omen’ny Tompo ny olony ny fananana vola amin-karena ( 8 : 21 « Mba hampandovako harena izay tia Ahy, sy hamenoako ny firaketany »).
Tsy manameloka ny olona manam-bola sy manan-karena mihitsy ny Soratra Masina.
Ny toetra sy ny fombantsika mitady sy mampiasa azy no hipetrahan’ny olana eo imason’ny Tompo ( 12: 41). Tafiditra ao anatin’izany ireto fomba mahazatra antsika ireto: – Maika hitady majinikarehefa hanao Rakitra – Vola rovitra no atao rakitra fa tsy misy mahita iny – Vola miforitra sy mivalombalona ary maloto no atao fanatitra izay mariky ny tsy fahatsorana manolo-tena ho an’ny Tompo – Tsy mivavaka fa tsy misy rakitra, sns.
Matetika dia voasarika isika hampitovy an’Andriamanitra amin’ny vola hoy ny Soratra Masina (Mat. 6 : 24).
Ny fitiavam-bola dia mampitoka-monina sy mampisaraka antsika amin’ny maro satria miaro ny eo an-tanana dia tsy mahatoky ny manodidina intsony. ( 5:8)
Inona ny fandrika manoloana ny vola ?
Azo fehezina amin’ireto ny voalazan’ny Baiboly amin’izany:
Tandremo fa sao manompo vola ianao fa tsy manompo an’Andriamanitra. ( 3: 5) Fandre aty am-piangonana ny hoe mangala-bola, mangala-drakitra, mihinam-bolam-piangonana, sns.
Tandremo fa sao andevozin’ny vola ianao ka manadino ny sitrapon’Andriamanitra (Mat. 19: 21 – 24).
Tandremo fa tsy toerana fitadiavam-bola any am-piangonana (I Tim. 6: 9, 10). Tsy fanao ny mieritreritra fa raha manome ny Fiangonana isika dia hivaly be dia be iny avy eo. Tsotra ny voalaza ao amin’ny Baiboly: “Ataovy am-pitiavana sy amin’ny fo ny asan’Andriamanitra dia anjaran’ny Tompo ny miahy antsika amin’ny endriny maro fa aza miandry valiny”. ( 6: 33).
Fanatitra, vokatra, fanomezana vola ?
Ny fanaovana fanatitra, vokatra, fanomezana ho an’ny Fiangonana dia tsarovy fa fanomezana sy fanoloran-tena ho an’Andrimanitra.
Isaky ny hanao fanatitra, na rakitra na fanomezana ho an’ny Fiangonana ianao dia misaora ny Tompo fa nahavita nanavao ny fanoloran-tenanano Aminy indray. Mahagaga ihany ny mahita ny olona sorena mahita ny isan’ny rakitra mihoatra ny iray ao am-piangonana. Ao ny tsy mba manao vokatra fa tsy misy dikany aminy izany.
Avy amin’ny fitahian’ny Tompo ny vola entinao manao fanatitra koa asehoy Azy fa nandray ianao ary te hisaotra Azy.
Aza mba mitady tambiny na tombony amin’ny fanaovana Adidy ara-bola any am-piangonana fa ataovy maimaimpoa (Mat 10: 8b “… efa nahazo maimaimpoana ianareo, koa manomeza maimaimpoana”).
Ataovy am-pitiavana araka izay inian’ny fonao ny adidy ara-bolanao eo anivon’ny Fiangonana. (II Kor 9: 7) ary aza mijery ny ataon’ny hafa fa ny adidinao tanterahina. Aza asiana kajikajy fa izay tianao sy heverinao fa vitanao atao.
Ny fanampiana sy ny fanomezana ny hafa dia endriky ny fanompoana ara-bola atao amin’Andriamanitra ihany koa (Mat. 25: 31 – 46).
Avelao ny Fanahin’Andriamanitra no miasa ato anatintsika hahafantarantsika izay ataontsika.
Aza ferana ny fotoana sy ny tranga azonao hanompoana ny Tompo ara-bola fa amin’ny fotoana rehetra hanatanterahana izany dia mivonona hatrany (« Amin’ny andro voalohany isan-kerinandro dia samia manokana ao aminy avy ho rakitra na amin’inona na amin’inona no anambinana azy » I Kor. 16 : 2.
Raha sanatria ka tsy mbola resy lahatra tsara ianao ny hanompo ny Tompo amin’ny volanao dia mivavaha Aminy ary hangataho ny Fanahiny Masina hanampy anao.
Hasina RAZAFINDRAKOTO, Mpitandrina (FJKM Québec – Canada)
Posted in Fampianarana